Guddoomiyaha Dhalinyarada Gobolka Hiiraan Oo Sheegay In Door Muuqata Ay Ka Qaataan Dadaalka Horumarineed Ee Ka Socda Beledweyne – Radio Muqdisho
Guddoomiyaha Ururka Dhalinyarada Gobolka Hiiraan Maxamed C/llaahi Buraale oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa ka warbixiyay howlaha balaaran ee Ururka iyo sida ay uga qeyb qaataan Horumarinta iyo Dib u dhiska Gobolka Hiiraan gaar ahaan Magaalada B/weyne.
Maxamed C/llaahi Buraale ayaa tilmaamay in Ururku uu kaalin muuqato ka qaato Mashaariicda Horumarineed ee ka socda Magaalada B/weyne Islamarkaana ay si dhow ula Shaqeeyaan howl wadeenada Mashaariicdaasi, iyadoo ay ka gacan siinayaan dardargalinta howlahaasi dhalinyara badana ay Shaqooyin ka heleen.
Guddoomiyaha Ururka Dhalinyarada Gobolka Hiiraan ayaa dhinaca kale waxa uu wax lagu farxo ku tilmaamay in dhalinyaradu ay dhawaan la kulantay Wasiirka Dhalinyarada Soomaaliya kaasi oo ka mid ahaan Wafdigii Labada Madaxweyne ee Soomaaliya iyo Jabuuti ee gaaray B/weyne oo ay ka wada hadleen arrimo la Xiriira horumarinta dhalinyarada Gobolka.
“Waxaan marka hore aad ugu faraxsanahay in aan B/weyne ku soo dhaweyno Wafdigii labada Madaxweyne ee Soomaaliya iyo Jabuuti kuwaasi oo dhawaan booqasho taariikhi ah ku yimid magaalada, Waxaa sidoo kale Farxad inoo ah in fursad ay noo noqotay in aan la kulano Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha oo noo balan qaaday in wax badan uu dhalinyarada Gobolka la qaban doono islamarkaana uu mar kale u imaan doono” ayuu yiri Guddomiyaha dhalinyarada Gobolka Hiiraan.
Ugu dambeyntii Guddoomiyaha Dhalinyarada Gobolka Hiiraan Maxamed C/llaahi Buraale ayaa waxa uu ka hadlay sida ay uga qayb qaataan dagaal Beeleedyada mararka qaar ka dhaca Gobolka oo uu sheegay in dhalinyaradu xiliyada Colaadaha ay ku baxaan si loo badbaadiyo dhiiga dadka walaalaha ah ee daadanaya islamarkaana ay gurmad u fidiyaan dadka ku barakaca.
"Sawirro"Dibadbax looga horjeedo xayiraadda xawaladaha Mareykanka oo Muqdisho ka dhacay